Samsung waxay sii wadi doontaa inay noqoto nooca ugu iibinta badan, sida uu sheegay agaasimaheeda | Androidsis
Maamulaha guud ee Samsung ayaa sheegay inay sii ahaan doonaan hogaamiyaasha Android
Samsung waa nooca telefoonka ugu iibinta badan adduunka oo dhan muddo sannado ah. Inkasta oo shirkadda Kuuriya ay soo dhacday dhowr sano, gaar ahaan 2018 natiijooyinka ayaa ahaa kuwo xun. In kasta oo aan aragno in shirkadda Huawei ay si xawli ah ugu socoto suuqa adduunka iyo mar horeba waa magaca labaad ee ugu iibinta badan adduunka. Xaqiiqdii, magaca Shiinaha ayaa sheegaya in hal ama laba sano gudahood ay noqon doonaan kuwa ugu fiican ee ku iibiya suuqa.
In kasta oo Maamulaha Samsung uu shaki ka qabo arrintan. In kasta oo iibkii xumaa sanadkii hore, isagoo lumiyay wadamo badan, Calaamada Kuuriya waxay sheegaysaa inay sii ahaanayaan kuwa ugu fiican iibiyaasha suuqa sanadaha soo socda. Xitaa waxay yiraahdaan waxay xukumi doonaan suuqa 10 sano ee soo socota.
Wareysi uu bixiyay Maamulaha guud ee Samsung ayaa wuxuu ku sheegay in sumada shirkada ay hogaamineysay Android 10 sano. Mawqif xaqiijinaya waxay sii wajihi doonaan tobanka soo socda sano suuqa. Marka uma muuqato inuu wax walaac ah ka qabo horumarka Huawei ama hadalada madaxa shirkadda Shiinaha.
Waxay sheegaysaa in tiknoolajiyada sida 5G, ayagoo horeyba usoo saaray taleefoonki ugu horeeyey ee taakulayntaas Koonfurta Kuuriya, sirdoon macmal ah ama taleefannada casriga ah oo laabma, iyadoo taleefankaagu suuqa soo gaarayo toddobaadyo yar gudahood. Waxaas oo dhami waxay wax weyn ka tari doonaan astaanta Kuuriya si ay u sii wadaan booskan.
Samsung waxay u aragtaa suurtagal weyn suuqa suuqyada casriga ah. Taasi waa sababta ay calaamaddu u bilaabayso moodellada qaybtan, si ay ugu sii ahaadaan mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan. Fold Galaxy wuxuu noqon doonaa kaliya talaabadaada koowaad ee suuqan. Maaddaama ay jiri doonaan moodallo badan mustaqbalka.
Hadalada qaarkood oo ah in madaxa Samsung uu aad ugu kalsoon yahay shirkadda. In kasta oo ay run tahay inay weli faa iido fiican ka haystaan ​​Huawei, waa inaysan dhayalsan tartankooda ugu weyn suuqa. Maaddaama ay tahay mid ka mid ah noocyada aadka u kordhay labadii sano ee la soo dhaafay. Marka waa horumar in lagu xisaabtamo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Maamulaha guud ee Samsung ayaa sheegay inay sii ahaan doonaan hogaamiyaasha Android
ZTE's Axon 10 Pro 5G wuxuu sii socdaa iibkiisa laga bilaabo Maajo 1
Waxaan horey u ognahay goorta la soo bandhigi doono OnePlus 7